Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: नयाँ नेपालका नाममा राष्ट्रघाती नेताहरुको अर्को कुकर्म : नेपाल लाई ११ टुक्रा बनाउने अन्तिम तयारी, फेरी बाइसे चौबिसे जस्तै हुने भयो नेपाल !
नयाँ नेपालका नाममा राष्ट्रघाती नेताहरुको अर्को कुकर्म : नेपाल लाई ११ टुक्रा बनाउने अन्तिम तयारी, फेरी बाइसे चौबिसे जस्तै हुने भयो नेपाल !
माओवादी, कङ्रेस, एमाले, मधेसी, र अन्य केही दलका नेता अनी भारतीय ईशारामा राज्य पुनसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले फरक मत सहित जातीय आधारमा ११ वटा प्रदेश बनाउने प्रस्ताव तयार पारेको छ । आयोगका पाँच सदस्यको वहुमतका अधारमा यो प्रस्ताव तयार पारिएको श्रोतले बताएको छ । आयोगका तीन जना सदस्य भने जातीय आधारमा भन्दा साँस्कृतिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक आधारमा प्रदेश बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् । उनीहरुले ७ वटा प्रदेशको अवधारणा पेश गरेपनि त्यो पास भने हुन सकेन । तर उनीहरुको त्यो फरक मत पनि सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । आयोगले प्रदेशलाई शक्तीशाली बनाउने र राज्य पुनसंरचनामा दुई तह मात्रै हुने प्रस्ताव तयार पारेको छ । केन्द्र र प्रदेश दुई तह मात्रै हुनेमा वहुमत भएको र केन्द्रको साटो प्रदेशलाई शक्तीशाली बनाउने प्रस्ताव पनि फरक मत सहित तयार भएको हो । शेर्पाको छुट्टै प्रदेश बनाउने प्रस्ताव शुरुमा राखिए पनि पछि त्यसलाई ताम्सालिङमा गाभ्नेमा बहुमत जुटेको थियो । आयोगको झण्डै दुई सय पृष्ठ लामो सुझावलाई अन्तिम रुप दिन मात्रै बाँकी रहेको श्रोतको भनाई छ ।आयोगमा छलफल हुँदा बराबर मत भए अध्यक्षले मत दिनु पर्ने प्रावधान छ । बराबर मत भएका चार वटा वुँदामा आयोगका संयोजक मदन परियारले मत दिन वाँकी रहेको श्रोतले बताएको छ । राज्यको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा पनि आयोगका सदस्यबीच एकमत छैन । आयोगले मंगलवारसम्ममा आफ्नो सुझाव पेश गर्नुपर्नेमा एक हप्ता समय थप्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । श्रोतका अनुसार आगामी माघ १७ गते सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाउने आयोगको तयारी छ ।
Posted by www.Nepalmother.com at 7:26 AM